Iyo gumi neshanu yepamusoro-yekutamba-yebhodhi mitambo | Ndipewo zororo
Mitambo yakanakisa yekutamba-yebhodhi
Isaac | 20/12/2021 15:56 | Yakagadziridzwa ku 20/12/2021 16:01 | General
ari mitambo yebhodhi vanoda kutaurwa kunze kwe mimwe mitambo yebhodhi, sezvo vakaiswa seimwe yeakanyanya kupindwa muropa uye anosarudzwa nevamwe vashandisi. Vauya kuzounza kunyanyisa kukuru, nevateveri vanopfeka sevatambi vemitambo iyi, vanogadzira yavo 3D-yakadhindwa kana seti yakagadzirwa nemaoko, vanogadzira nekupenda zvimiro zvavo, nezvimwe. Vakatokochekera vanhu vazhinji kuti vaverenge vaive vasina kunyanya pro-mabhuku, kuvandudza kugona kwepfungwa, pfungwa yekubatana, nezvimwe.
Yese fivha inouya chaizvo kubva kune izvo zvinoita kuti mitambo iyi ive yakasiyana, uye ndizvo kunyudzwa kukuru kwemutambi izvo zvinobvumira. Mitambo iyi inotaura nyaya, isa mutambo, uye vatambi ndivo varatidziri vanofanirwa kupinda mune chimwe chiitiko kana basa, nekudaro zita ravo. Chiitiko cheavo vanoda kurarama zvinonakidza mamiriro uye zvinoshamisa adventures.
1 Nhungamiro yekusarudza yakanakisa-yekutamba mitambo
1.1 Dugeons uye shato
1.2 Ziso rakasviba
1.5 Nyika Dzinorambidzwa
1.6 Ngano ye5 zvindori
1.8 Kuwa kweAvalon
1.9 Ishe weRings: Nzendo kuburikidza neMiddle Earth
1.11 Rima Rakakura
1.12 Horror: Horror Adventures
1.13 Arkham anotya
2 Chii chinonzi RPG?
3 Mhando dzemitambo-yekutamba
3.1 Maererano nenzira yekutamba
3.2 Maererano nedingindira
4 Nzira yekusarudza yakakodzera-yekutamba mutambo
Nhungamiro yekusarudza yakanakisa-yekutamba mitambo
Pakati pevamwe ve yakanyanya kunaka-yekutamba mitambo yebhodhi izvo zvaunogona kutenga, uye ndivo vatengesi vakanyanya muchikamu ichi, zvinosanganisira:
Dugeons uye shato
Ndiyo imwe yemitambo-yekutamba-bhodhi mitambo par kugona. Imwe yedzakanyanya kupararira munyika. Iwo mutambo wekudyidzana wekufungidzira unokunyudza mune zvemashiripiti zvakasikwa. Inokodzera kubva pamakore gumi ezera, uye inogona kuridzwa nevatambi vari pakati pe10 ne2. Mariri iwe uchafanirwa kusarudza hunhu hwako uye kurwa nezviratidzo zvikara, uye urarame adventures nyowani nguva yega yega, sezvo kuita sarudzo nemukana zvichireva kuti hazvisi nguva dzose zvakafanana. Pamusoro pezvo, chinhu chakanaka ndechekuti uchawana mabhuku akati wandei ane nyaya dzakasiyana uye madingindira ekusarudza kubva kana kuunganidza.
Tenga Dungeons & Dragons Iyo yekushanya inotanga Tenga Essential Starter Kit
Ndiyo imwe yemakirasi, uye yave makumi emakore akati wandei kubva pakatangwa mutambo weGerman. Iyo 5th Edition yakashandurirwa muchiSpanish, kuitira kuti vateveri vari pano vagonewo kunakidzwa neanonakidza mafambiro muAventuria, kondinendi izere nengano, zvisinganzwisisike mavara, zvikara uye zvisikwa zvinoshamisa, uye umo vatambi vachatamba magamba.
Tenga Ziso Rakasviba
Devir Pathfinder. Mitemo...
Uyu mumwe zita nderimwe reanonyanya kuzivikanwa ekutamba-kutamba mitambo. Mariri, mutambi wega wega achave nebasa remutambi anofanirwa kurarama munyika inoshamisa izere nemashiripiti uye zvakaipa. Iri bhuku rinosanganisira mitemo yemutambo, mutungamiriri wemutambo, uye mitemo yekugadzira mavara akanaka, sarudzo dzezviperengo, nezvimwe. Mutambo wakanakira kutanga wakapihwa nyore.
Warhammer inoda mashoma sumo, inozivikanwa kwazvo munyika yemutambo wevhidhiyo uye zvakare pakati pemitambo yebhodhi-yekutamba. Mutambo wekufungidzira unoyeuchidza WoW kana Warcraft neimwe nzira, sezvainokuendesa kune yekare nyika yegothic inotongwa nezvisikwa zvinotyisa, magamba, zvakavanzika nenjodzi.
Nyika Yakarambidzwa Quetzel's ...
Yakagadzirwa neMahara League Publishing, ichipa chiitiko chikuru mune yakachena yakare chikoro maitiro. Ikozvino inouya mune yayo nyowani edition ine mechanics matsva ekurarama adventures muNyika Dzakarambidzwa. Muchiitiko ichi, vatambi havasi kutamba magamba, asi mbavha uye vapambi vanozoita chero zvingatora kuti vararame munyika yakatukwa umo vagari vayo vasingakwanise kusiyanisa pakati pechokwadi nengano.
Tenga Nyika Yakarambidzwa
Ngano ye5 zvindori
Fantasy Flight Games - Iyo ...
Inoda Mitambo yakagadzira mutambo uyu webhodhi une marongero akavakirwa pafungidziro yekumabvazuva. Yakaiswa muRokugan, nzvimbo yekufungidzira mune feudal Japan. Uye zvakare, inosanganisira mamwe maChinese pesvedzero, uye izvo zvinokuisa iwe mune shangu dze samurai, bashi, shugenja, mamongi, nezvimwe.
Tenga Iyo legend ye5 zvindori
Gwaro rechipiri reGloomhaven rakashandurirwawo muchiSpanish. Mutambo uyu hausi umwe weanonyanya kukurudzirwa kuti utange munyika yekutamba, asi wakanyanya kunangana nenyanzvi. Mutambi wega wega anotora chinzvimbo chemercenary akanyudzwa munyika inoshanduka yekufungidzira. Pamwe chete vachashanda pamwe nekurwa mumishandirapamwe yakasiyana-siyana inoshanduka zvichienderana nekuita.
Tenga Gloomhaven 2
Yakasvibiswa Grail: Kuwa ...
Rimwe remazita enyanzvi. Iri zita rekutamba-mutambo rinobatanidza ngano dzeArthurian, Celtic mythology, uye yakadzika uye yebazi nyaya inobvumira matambudziko kuti auye nenzira dzakasiyana pese painotambwa mutambo. Iwe uchafanirwa kuita sarudzo dzakaoma kwazvo, zvakare dzimwe dzinoita sedzisina kukosha, asi dzinogona kushandura zvinhu zvakanyanya mukufamba kwenguva. Wagadzirira here?
Tenga Kudonha kweAvalon
Ishe weRings: Nzendo kuburikidza neMiddle Earth
Musoro weJRR Tolkien hauna kungove firimu uye mutambo wevhidhiyo, unouyawo semutambo-wekutamba bhodhi mutambo neiyi paki. Mariri iwe unonyura munzendo kuburikidza neMiddle-earth, ine adventures uye zvakanyanya ngano mavara eiyi saga. Iyo dynamics yemutambo yakakamurwa kuita mishandirapamwe, uye ramifications, zvekuti zvinokushamisa iwe kunyangwe ukatamba uchidzokorora uyezve ...
Tenga Ishe weRings
Mushure medota reHondo Yenyika I, guta guru-nyika rinozivikanwa seLa Fábrica rakavhara magonhi aro, richikwezva kutarisa kune dzimwe nyika dzakavakidzana. Chokwadi chakafanana chakagadzwa muna 1920 uye umo mutambi wega wega achatamba mumiriri wemapoka mashanu eEastern Europe, achiedza kuwana rombo uye kutora nzvimbo yakatenderedza isinganzwisisike Factory.
Rima guru rinopa yakakura inonakidza chiitiko mune yechokwadi classic maitiro. Mutambo webhodhi wemazuva ano, wakazara-wakazara une zvinokatyamadza zvidiki uye mutambo wakapusa. Inotarisa pane zviito zvemagamba, pasina chikonzero chekuti mutambi aite semutungamiri wekutonga vavengi.
Tenga Rima Guru
Horror: Horror Adventures
Strategy, pfungwa, kusika, kushandirapamwe ... zvese zvakasanganiswa mune inotyisa dhizaini kwaunonyura iwe pachako munyika izere nezvinoshamisa uye zvakavanzika. Mutambi wega wega anotora chinzvimbo chemwanakomana waCrafton, uye anofanira kuona kuti ndiani akauraya baba vake nekuongorora zviratidzo zveimba yekare yemhuri.
Mutambo unotyisa uye mutambo-wekutamba unokuendesa kuguta reArkham, iro riri kutyisidzirwa nezvisikwa kubva kuhupenyu hwepashure perufu. Vatambi vachafanira kujoinha mauto, vachitora chinzvimbo chevaongorori, kuchengetedza mamiriro ari kuisa pasirese panjodzi. Chinangwa ndechekuunganidza zvinongedzo uye zviwanikwa zvinodiwa kutarisana neVakare uye kukanganisa zvirongwa zvavo zvakaipa.
Tenga Arkham Horror
Chifukidzo - Mutambo we...
Uyu mutambo-wekuita mutambo une cyberpunk theme, munzvimbo umo tekinoroji yakasundira vanhu kusvika painogumira, uye pazvinonetsa kusiyanisa pakati pechaiyo neicho manyepo. Naizvozvo, iwe unofanirwa kutungamira kuramba (kunyangwe chikamu chemuviri wako chiri mechanika ...) kuyedza kuisa miganhu pane tekinoroji yakakuvadza zvakanyanya. Yakafemerwa nemabasa ane mukurumbira akadai seBlade Runner, Altered Carbon, uye The Expanse.
Chii chinonzi RPG?
Kune avo vasati vaziva chii chinonzi mutambo webhodhiIwo mutambo wakafanana mune zvimwe zvinhu nemimwe mitambo, asi apo vatambi vanozofanirwa kutamba basa kana basa. Kuti uite izvi, ine yakakosha chimiro:
Mutungamiriri wemutambo: Kana mutambo wekutamba uchitanga, unogara uchitariswa nemumwe wevatambi vanozoita semutungamiriri kana tenzi wemutambo. Ndiye mutungamiri uye munyori wemutambo, uyo anotsanangura zviitiko, chikamu chinokosha chichataura nyaya uye kuita semurevereri pakati pevatambi vanotora chikamu. Mukuwedzera, iwe unogona zvakare kutamba mavara asina kuratidzwa nevamwe vatambi, senge echipiri mavara. Rimwe basa remukuru wechikoro nderekuva nehanya nemitemo iri kuteverwa. Kuti uite izvi, ichava iyo ine bhuku remutambo nguva dzose.
Vatambi: vanozove vamwe vese vanotora mamwe mabasa kana mabasa akasiyana nemutungamiriri wemutambo, anowanzo kutamba magamba enyaya. Mutambi wega wega achange aine pepa rake rehunhu, ane hunhu, kugona uye imwe data yakakodzera yemunhu waakasarudza. Iwe unogona zvakare kusanganisira zvimwe zvinhu senge zvipfeko zvauri kupfeka, zvombo, kugona, nhoroondo yako, zvinhu zvesimba, nezvimwe.
Mepu: vanoshandira kuisa vatambi panguva yemutambo. Anogona kunge ari cartographic, mabhodhi, kana 3D zviratidziro, chaiwo mapikicha, props uye kushongedzwa, nezvimwe.
Nezvese zvinhu izvi, mutambi achasarudza, ne dice chance support, zviito zvipi zvaunoita neunhu hwako, uye mutungamiriri wemutambo achasarudza kana zviito izvozvo zvinogona kuitwa kana kwete, kuoma, uye kuti mitemo inoremekedzwa. Uyezve, tenzi anozofungawo kuti ndezvipi zviito zvinotorwa neNPC kana vasiri vatambi.
Izvo zvakakoshawo kuziva kuti kuita-yekutamba mitambo yebhodhi vanodyidzana, kwete kukwikwidza semimwe mitambo. Naizvozvo, vatambi vachafanira kubatana.
Pakati pe mhando uye zvakasiyana yekutamba-yekutamba mitambo yebhodhi ndiwo mapoka anotevera:
Maererano nenzira yekutamba
Maererano ne kutamba sei kune RPG, inogona kusiyaniswa pakati:
Tafura: ndeapi anotsanangurwa muchinyorwa chino.
Rarama: izvo zvinogona kuitwa mumasikirwo echisikigo, zvivakwa, nezvimwe, nezvipfeko kana makeup yehunhu.
Netsamba-Anogona kuridzwa achichinjana uchishandisa maemail, kunyangwe isiri iyo yakanakisa nzira kana inokurumidza. Iye zvino maemail uye mameseji ekutumira mameseji akawedzera kuita uku.
RPG mitambo yemavhidhiyo: iyo yedhijitari vhezheni yetabletop-yekutamba mitambo.
Maererano ne dingindira kana maitiro kubva kumutambo-wekutamba, unogona kuwana:
Historical: zvichibva pazviitiko chaizvo munhoroondo yevanhu, sehondo, kupinda nechisimba, Middle Ages, nezvimwe.
Kufungidzira: vanowanzo sanganisa zvikamu zvenhoroondo, kazhinji kubva kuMiddle Ages, zvine zvinhu zvekufungidzira, sekubatanidzwa kwevaroyi, troll, orcs, uye zvimwe zvisikwa zvengano. Semuenzaniso, epic-medieval fantasy RPGs.
Kutyisa uye kutyisa: rimwe remadingindira evanoda zverudzi urwu rwemukati, nezvakavanzika, kupenga uye kutya. Mabasa eHP Lovecraft akafuridzira mazhinji acho. Uye zvakare, iwe unovawana iwo ezvipoko, zvikara, zombies, vampires, werewolves, zvisikwa kubva mumarabhoritari esainzi kana kutsvagisa kwemauto, nezvimwe.
Uchrony: chimwe chinhu chaicho, chinopa kuti chiitiko chaicho chingave sei kubva kune imwe nzira yekuona. Semuenzaniso, nyika ingadai yakaita sei dai Germany yakakunda Hondo Yenyika II, nezvimwewo.
Future fiction kana sainzi fiction: zvichibva pane ramangwana revanhu, kana muchadenga. Kune akawanda akasiyana pano, akadai semitambo yakavakirwa papasi-apocalyptic nyika, pakuumbwa kwemapuraneti, cyberpunk, nezvimwe.
Space Opera kana epic-nzvimbo fungidziro: rudzi rudiki rwune hukama nerwapfuura, asi uko ngano dzesainzi chingori chimwe chinhu chekugadzirisa. Muenzaniso ungave wengano wepasirese weStar Wars, uko kune ngano yesainzi, asi zvinoitika mune ingangoita ngano yapfuura.
Nzira yekusarudza yakakodzera-yekutamba mutambo
Sarudza mutambo wakanaka Tafura yekutamba-yekutamba iri nyore, sezvo uchingofanirwa kutarisa pane akati wandei mapoinzi, akadai se:
Age: zvakakosha zvikuru, semamwe mabhodhi emitambo, kuti zera raakagadzirirwa rinozivikanwa. Havasi vese vane zvemukati zvinoenderana nemazera ese, sezvo vachigona kusanganisira mifananidzo yevakuru, mazwi akaipa, uye kunyangwe ayo akaomarara kune vadiki. Zvakakosha kuziva kuti ndeapi mazera avanotamba, uye enda kune akakodzera.
Nhamba yevatambi- Chimwe chinhu chekufunga nezvehuwandu hwevatambi vavanotsigira. Kana uchizotamba neshamwari dzakawanda kana mhuri, zvakakosha kuti vatambi vakakwana kana zvikwata zvipihwe, kuitira kuti pasave nemunhu anosiiwa.
Thematic: iyi inyaya yekuravira, uye iwe unofanirwa kusarudza iyo inonyatsoenderana nezvaunoda. Kune sainzi ngano, mhando madhiragoni nemakomba, ane cyberpunk theme, apocalyptic, nezvimwe.
Deployment mikana: Mitambo mizhinji yekutamba inosanganisira kushandisa bhodhi kana kusada chero chinhu chakakosha. Nekudaro, zvimwe zvingada imwe nzvimbo yekuparadzira, kana zvimwe zvinhu. Izvo zvakakosha kuti utarise zvaunogona kuita uye kana uchikwanisa kutamba mutambo-wekutamba munzvimbo yaunayo uye nezviwanikwa zvaunazvo, kana zvichigona kuridzwa munzvimbo dzakavhurika, nezvimwe.
Customization kugona: mimwe mitambo yekutamba inotsigira dhigirii rakakura rekugadzirisa, kukwanisa kuwedzera ako mavara kana manhamba, kugadzira zvekushongedza zvekushandisa sebhodhi remutambo, nezvimwe. Vagadziri uye vanoda DIY uye mhizha, zvechokwadi vanosarudza iyi mhando yemitambo-yekutamba mitambo, iyo inovabatsirawo kuvandudza hunyanzvi hwavo uye fungidziro yekugadzira yavo yega shanduro. Semuenzaniso, mamwe anongosanganisira bhuku rine mirairo uye nyaya, uye marongero anogona kugadzirwa newe. Mamwe anogona kusanganisira anonzi mamodule kana zviitiko zvinoita kuti basa rako rive nyore.
Mitambo yemitambo yehunyanzvi: zvimwe zvakaoma uye zvakagadzirirwa zvakanyanya kune nyanzvi dzerudzi urwu rwemhando. Kunyangwe maAmateurs vachigonawo kudzidza uye kuva pro, asi vangave vasiri ivo vakanyanya kunaka kutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndipei zororo » General » Mitambo yakanakisa yekutamba-yebhodhi
Mitambo yebhodhi yakanakisa zvachose
Iyo yakanakisa Escape Room bhodhi mitambo